Fiakarana fohy fararano 2013
Lamaody Fashion News
Ny fararano dia ny fotoan'ny zavona, ny fihaonana amin'ny afobe ary ny takariva mangatsiaka. Ankoatra izany, io ihany koa no fotoana anombohan'ny lamaody ny mpilalao sy ny miomana amin'ny ririnina. Ny tena tian'ny ampitso amin'ny akanjo ivelany dia akanjo. Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny iray amin'ireo karazan-tsavony isika - akanjo lava fohy. Hilaza aminay ianao hoe inona ny akanjo vita amin'ny trangan-javatra hitranga, ary koa miresaka momba ireo fanampiana mahomby indrindra amin'ny akanjo fohy.
Fiandohan'ny fararano kely 2013
Ny volom-bolo fohy be dia be dia be no naseho tamin'ny endrika fampisehoana farany. Tsy nisy ny famoriam-bola isan-karazany ireo mpamorona ny dikany manan-danja eran-tany, tsy vitany ny karazana modely roa farafaharatsiny.
Ny endrika malaza indrindra amin'ny sokajy ivelany amin'ity vanim-potoana ity dia miaramila , klasika, foko, futuristic, ary grunge sy rock. Ny karazana fialam-boly lamaody indrindra dia ny embroidery sy ny applique (tafiditra amin'izany ny dantelina), ny kofehy, ny ranomainty amin'ny loko mifanohitra, ary ny karazana rojo, ny rivotra ary ny spikes.
Modely maro manana endrika avo lenta na marefo, na dia tsy manary toerana ambony aza ny dikan-tsoratry ny akanjo fohy roa.
Amin'ny inona no manao akanjo fohy amin'ny fianjerana?
Ny sary misy akanjo fohy dia tokony ho noforonina arakaraky ny endriky ny akanjo ivelany. Izany hoe, raha lehibe ny tampony, dia tokony ho kely ny ambany. Raha voafintina ilay akanjo, dia afaka manao azy toy ny amin'ny akanjo na pataloha tery, na amin'ny lehibe.
Ny vahoaka malaza amin'izao vanim-potoana izao, ireo singa be loatra dia tsara kokoa amin'ny kiraro eo amin'ny voditongotra, izay manampy ny endrika mampiavaka, raha tsy izany dia mihazakazaka ny loza mety hitranga.
Amin'ny fahatokian-tena matotra, afaka manandrana amin'ny famolavolana tebaka sy loko ianao, ohatra, lamba marevaka "plastika" sy jiro manga malefaka na hoditra sy chiffon. Ny fampifandimbiasana mifanohitra dia maneho tena mahavariana ary manome antoka ny mpandresy eo anivon'ny vahoaka, saingy amin'ny tsy fahaiza-mitantana dia afaka milalao miaraka aminao ny vazivazy mampihetsi-po, miala amin'ny endrika icon ho an'ny niharam-boina.
Manicure - Summer 2015
Amin'ny inona no hikolokolo jeans 2015?
Bows Modes - Herinandro 2014
Totozy Summer 2013
Maxi Dresses 2013
Fashion ho an'ny vehivavy bevohoka 2015
Tattoo amin'ny kintana iray amin'ny tongotra
Fashion Bags - Lohataona 2016
Gel-lacquer miaraka amin'ny sparkles
Spring Collection Collection 2014
Ny haingo tsotra indrindra isan'andro
Ireo akanjo jiro marevaka - ny ririnina 2015-2016
Laparoskopin'ny cyst ovar
Tsy misy fe-potoana: Carrie Fisher dia niresaka momba ny tantara momba ny "Star Wars"
Misotro zava-pisotro - ahoana no hahatohitra sy izay azonao atao?
Mpivarotra ho an'ny sipa tsara indrindra
Dresses amin'ny Summer Dresses 2016
Bracelets miaraka amin'ny satroka
Tortilla amin'ny teny
Marika famantarana amin'ny mariazy mandritra ny taona
Nosamborin'ny polisy ny ahiahin'ireo Kim Kardashian tany Parisy
Mitovy kapa amin'ny kapa?
Ririnina ao amin'ny Repoblika Tseky
Tsy hohadinoinao mihitsy hoe antitra io modely io!
Moa ve ny lehilahy tia vehivavy feno?
Mpilalao 11, izay niova mandrakizay ny fiainany aorian'ilay anjara ao amin'ny sarimihetsika
Fitaovana ho an'ny fanatanjahantena
Eustoma ao an-trano
Modely mody amin'ny akanjo 2014
© 2021 mg.unistica.com